U Win Tin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
ဧပြီ ၂၃၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ ဈာပနအခမ်းအနား မြင်ကွင်း မိုးမခဓာတ်ပုံ၊ ဟန်သစ်နိုင်၊ ဆူးအယ်လင်း၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ဧပြီလ ၂၃၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခင်းက ရေဝေးသုဿန်တွင် ကွယ်လွန်သူ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏...
ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း၍ ခေတ်လမ်းကို လျှောက်ခြင်း (၁၀+၁၁+၁၂) ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ၏ ကိုယ်တိုင်ပြော ဘဝဇာတ်ကြောင်း (မူလ လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ ရေဒီယို အစီအစဉ်၊ မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၄...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ဖျာလိပ် ပတ်ကြမည့် သူများ
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ဖျာလိပ် ပတ်ကြမည့် သူများ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၄
Saw Ngo – ကြယ်ပြောင်ကြီး
ကြယ်ပြောင်ကြီး စောငို၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ အာကာပြာလဲ့ ကဗျာဖွဲ့သည် အဘယ့်ကြယ်ပြောင် လူ့ဘောင်ခရီး ပြီးခဲ့ပြီ။ မဟာသတ္တိ ဗျတ္တိပိုင်ရှင် အကြင်အာဇာနည်ကား တိုင်းပြည်အလုံး၏ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကျုံး ဆောင်ယူသွားခဲ့ပြီ။...
ဦးဝင်းတင် ရည်စူးပြီး တက္ကဆပ်ပြည်၊ အမာရီလို မြန်မာမိသားစုများ ဆွမ်းကပ်မည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄
ဦးဝင်းတင် ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ပွဲကို ပါရီမြို့မှာပြုလုပ်မည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ၂၁-၄-၂၀၁၄(တနင်္လာနေ့) နံနက်၆-၃၀တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်သူအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကအဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်အား ဆွမ်းသွတ် တရားနာပွဲ...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် – ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာ နှင့် သတင်းစာ
ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာ နှင့် သတင်းစာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ။ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ U Win Tin @ NLD Headquarters in...
Kyaw Thu – ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈာပနပွဲ
ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈာပနပွဲ ကျော်သူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ၂၁.၄.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် (၆း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် သံမဏိစိတ်ဓါတ်နှင့်လူသားဟု တင်စား ခေါ်ဝေါ်နေကြသော ဟံသာဝတီ...
New York Burmese Community – ဟံသာဝတီ ဘဘဦးဝင်းတင်အား ရည်စူး၍ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး သင်္ကန်းကပ်လှူမည်ြ
“ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်သူ နာယကအဖွဲ့ဝင်၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဘဘဦးဝင်းတင် အတွက် ရည်စူးပြီး နယူးယောက်မြို့နေ ရပ်နီးရပ်ဝေးမိတ်ဆွေများ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးအင်အားစုများ မှ ရက်လည်ဆွမ်းကပ်အမျှဝေပါမယ်။ ” နေ့စွဲ ၊ ဧပြီလ ၂၁...
ကေသွယ် – ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏
ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏ ကေသွယ်၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ပန်းတွေ အမျိုးစုံ အရောင်စုံစွာ ၀န်းရံ နေတဲ့ အပြာရောင် ဓါတ်ပုံကြီး တပုံ ရဲ့ ၊ အပေါ်မှာ ၊ အင်္ဂလိပ်လို...
Junior Win – တကိုယ်တော် သူရဲကောင်း
တကိုယ်တော် သူရဲကောင်း ဂျူနီယာဝင်း၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ မှန်တာကိုပဲလုပ် မမှန်တာကို ဘယ်တော့မှမလုပ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အမှန်တရားအတွက် လုပ်ဖို့ ပြောဖို့ တိုက်ဖို့ အဘမှာ သတ္တိ ရှိတယ်။ အဘရေ ….....
ဦးဝင်းတင်၊ ယုဒဿန်ရိပ်သာ နဲ့ ပန်းချီပြပွဲများ
ဦးဝင်းတင်၊ ယုဒဿန်ရိပ်သာ နဲ့ ပန်းချီပြပွဲများ မင်းကျော်ခိုင် ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ကျနော်အဘဦးဝင်းတင်ကိုဆုံခဲ့တာ ၁၉၈၆ ဒီဇင်ဘာလပထမပါတ်ထဲမှာပါ၊ ယုဒသန်ရိပ်သာမှာ ကျနော်ပန်းပြပွဲတပွဲ တာဝန်ယူစီစဉ်တုန်းက၊ ပြပွဲနာမည်က Message Modern Art...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ သေခြင်းတရား (ကိုရာဇာ) (ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကဏ္ဍအတွက် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဦးဝင်းတင်နဲ့ နေထိုင်ခြင်း အခန်းဆက်များ ကုိုရာဇာ။ ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၃ ● ဦးဝင်းတင်နဲ့ သေခြင်းတရား လူတွေမွေးဖွားကတည်းက...
အာဏာရှင်ရဲ့ လမ်းခုလတ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီသို့ လမ်းခွဲ (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မိုးမခအင်တာဗျူး) မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ (ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကဏ္ဍ) (ဓာတ်ပုံ – ၂၀၁၄ ဧပြီ ၂၂၊ ဦးဝင်းတင်ဈာပနအကြို ဂါရ၀ပြုအခမ်းအနား၊...
ဆောင်းယွန်းလ – “တချို့က”
“တချို့က” ဆောင်းယွန်းလ၊ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ တချို့က နာမည်ဆိုးတွေနဲ့ပေါ့ ကိုယ့်အတွက် တချို့ကို သတ်ခဲ့ကြတယ်…. တချို့က တချိ့အတွက် တချို့ကို သတ်ခဲ့ကြတယ် နာမည်မကောင်းခဲ့ကြပါဘူး…. တချို့က နာမည်ပျက်ရုံသက်သက်ပါပဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများ ဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း ဂါရ၀ပြု အခမ်းအနား ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၄
Aung Way – ခြင်္သေ့ နီ သို့၊ အလေးနီ ဖြ င့်
A TRIBUTE TO U WIN TIN ခြင်္သေ့ နီ သို့၊ အလေးနီ ဖြ...
ဦးဝင်းတင်အတွက် ယုဒဿန်ခန်းမ ဂါရ၀ပြု အစီအစဉ် ဒုတိယနေ့ ဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဟန်သစ်နိုင် (မိုးမခ)၊ ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ ဦးဝင်းတင်အတွက် ယုဒဿန်ခန်းမ ဂါရ၀ပြု အစီအစဉ် ဒုတိယနေ့မှာ သူ့ကို လေးစား...
ကာတွန်း အော်ပီကျယ် – ကြယ်
ကြယ် ကာတွန်း အော်ပီကျယ် ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အား ဂုဏ်ပြုကာတွန်း (ကာတွန်းအော်ပီကျယ် ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ရယူပါသည်)